IBC PR သည်အမဲလိုက်လေ့လာရေးခရီးစဉ်မဟုတ်ပါ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC PR စနစ်တစ်အမဲလိုက်ခြင်းတောင်တက်မဟုတ်
IBC PR စနစ်တစ်အမဲလိုက်ခြင်းတောင်တက်မဟုတ်
"သင်ဘာလုပ်နေမသိရပါဘူးသောအခါ, လျင်မြန်စွာထိုသို့ပြုမှအကောင်းဆုံးင်!" - Jase ရော်ဘင်ဆင်, "duck မင်းဆက်"A & E ကို, Gurney Productions, 2012-17
အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စျေးကွက်ကလူခဲယဉ်းရှာနေနှင့် publicists သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စယအဘယ်သို့ရှိနေသည်ကိုကောင်းစွာမှာမိုးသည်းထန်စွာ start သည့်အခါကုန်သွယ်ရေးပြပွဲဖြစ်ကြသည်။ ဤလူအတိတ်ခြောက်လပါပြီဘယ်မှာစာနယ်ဇင်းလူများ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, စဉျးစားမိ။
အားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ဖိအားဖြစ်ရှိသွားပါက, အမ်စတာဒမ်မှာထက် IBC မှာလုပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
CES မြို့မှကြွလာသောအခါအဆင်ပြေပါက Las Vegas မှကဲ့သို့သောပါတီမြို့မဟုတ်ဘူး; ဒါပေမယ့်အမ်စတာဒမ်, အထူးသဖြင့်ကျဆုံးခြင်းအတွက်လေးနက်အလုပ်အချိန်ဇယားကိုကုန်သွယ်ရေးပြပွဲကျင်းပရန်နေရာကောင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ကျက်သရေဟာအဆုံးမဲ့နာရီ, Back-To-ပြန်အစည်းအဝေးများနှင့်စက်တင်ဘာလအဖြစ်အပျက်ပျော်စရာ၏နောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများဆွေးနွေးမှုများစေသည်။ ဒေသခံတွေတွေ့ဆုံရန်မငြိမ်သက်မှုများကနေအနားယူမယူကြဘူးသူကလူတို့အဘို့, ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့နှင့်သောက်စူးစမ်း; ဒါကြောင့်ပဲအခြားရှိုးပါပဲ။
ထိုသို့သော့ချက်သရုပ်ဆောင်တွေအများကြီးနဲ့အလွန်လေးနက်သော, စီးပွားရေး-oriented ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။
အဆိုပါလိုင်း / သူဌေးက
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနီးပါး 2,000 ကုမ္ပဏီများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကို preen နှင့်တစ်ဦးခိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့တက် pumped ရ - ရောင်းအား - ထိုသည် dynamically ကြီးထွားလာ M & E လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ပေါ်မှာ။
သူတို့ / မျှော်လင့်ချက်နောက်တစ်နေ့အဆင့်အထိသူတို့ကိုယူပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ထားသစ်ကိုထုတ်ကုန် / န်ဆောင်မှုများပြရန်
ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကြောင်းကို buzz အများကြီးဖွံ့ဖြိုး
အလွန်အနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်ကုမ္ပဏီ enable သို့မဟုတ်ဝယ်ယူရမည်
သူတို့က, အနင်္ဂနွေကတဆင့်ကုမ္ပဏီ / ထုတ်ကုန်စာပို့ခြင်းလက်မှတ်ထိုးဖို့ / tweaking ညအလုပ်လုပ်ရန်; ထုတ်ကုန်၏ပထမဦးဆုံးပြေးတက်ပြီးသွား; ရှေ့ပြေးပုံစံ polishing ။
သူတို့ဟာ / မီဒီယာ၏ "ကြီးမားသော" အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအားဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရနှငျ့တှေ့ဆုံရကြောင်းသေချာစေရန်၎င်းတို့၏လူသိရှင်ကြားရှေးရှေးကိုညွှန်ကြား။ (ဟုတ်ပါတယ်, ဗာဂျီးနီးယား, လူမှုမီဒီယာဖောင်းပွအပေါငျးတို့သရှိနေသော်လည်းစာနယ်ဇင်းကလူနေဆဲမြင့်မားသောကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. ကျင်းပကြသည် - အထူးသဖြင့်သူဌေး)
သူတို့အိတ်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အသံကျယ်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်လွှားသူတို့ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျရအစွမ်းထက်, ဦးဆောင်-အစွန်းထုတ်ထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ကိုပြောပြအဖြစ်သူတို့ publicists မှ last- မိနစ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အပလီကေးရှင်းသတင်းအချက်အလက်ပစ်။
သူတို့ကအစဉ်မပြတ်သူတို့နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းမည်သည့်မီဒီယာကလူကိုမေးပါ။ ဘီလ်, ဂျုံး, ဂျိန်း, ဝေါ့, ဒါဝိဒ်, ဒေဗောရစာရင်းအပေါ်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်ဆက်ဆံရေးမေးခွန်းထုတ်တဲ့အသံ, သူတို့ကမေးကြတယ်။
ယခုနှစ်တွင်မီဒီယာ၏ 1,000 အဖွဲ့ဝင်များကထက်ပိုမို - ပုံနှိပ်, ဝက်ဘ်, ရေဒီယို, တီဗီ - မယ့်အရာကိုဟော်လန်အပေါ်ဆင်းနှင့်ပူသောအရာကိုတစ်ဦးပထမဦးဆုံးလက်ရှုမြင်ရမှတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သူတို့ကအဘူဒါဘီမီဒီယာ, Tencent AT & T, Verizon ကနှင့်အခြားသူများဒစ္စနေး, Netflix, Comcast, Sky, တူးမြောင်း + အမေဇုံ, Sky အိန္ဒိယ, MBC, လူတွေရဲ့ဖန်သားပြင်ဖြည့်ဖို့လုပ်နေတယ်ပါလိမ့်မည်အရာကိုမရှိသောသတင်းအချက်အလက် / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်။
အစည်းအဝေးများ, သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ, ပါတီများ, လာရောက်လည်ပတ်သူရပ် - - အများစုမှာပြပွဲကိုဖုံးလွှမ်းရန်စီစဉ်ခြင်းနှင့်သူတို့တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအဖြစ်တစ်ပတ်ရှင်သန်။
တချို့ကအကြီးတန်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့ကိုသူတို့လိုအသုံးပွုနိုငျသတင်းအချက်အလက်များပေးဖို့လည်းမရှိသေချာစေရန်၎င်းတို့၏ရပ်တည်ချက်လည်ပတ်မှု / ကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးများအချိန်စာရင်းကြိုက်တယ်။
တချို့ကအနည်းငယ်အစည်းအဝေးများအချိန်စာရင်း။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုဖွင့်၏ကျန်မစောင့်, ဒါသူတို့ခြေအိတ်ချွတ်ခေါက်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အသစ်တခုအခနျးတှငျ mark လိမ့်မည်ဟုလုံးဝအထူး, လုံးဝထူးခြားတဲ့တစ်ခုခုနှင့်အတူပြပွဲမှလာသောသူတို့ကိုဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ဖြတ်ပြီးထိ မိ. လဲနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ခန့်အပ်ထားသောကျည်စောင့်ရှောက်ဖို့အချိန်အတွက်တယောက်ကိုတယောက်ခန်းမကနေရနိုင် gawd အချို့အချိန်ဇယားအစည်းအဝေးတွေနဲ့မျှော်လင့်ချက်။ ၎င်းတို့၏စိတ်ထဲတွင်၏နောက်ကျောမှာတော့သူတို့ကဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်သိကြ၏။
အကြား၌, သူတို့ကုမ္ပဏီများနှင့်သူတို့သိ PR စနစ်လူတို့နှင့်အတူအစည်းအဝေးများအချိန်စာရင်းလိမ့်မယ်နဲ့မှန်မှန်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါဟာမျက်နှာ-to-မျက်နှာအဆက်အသွယ်သက်တမ်းတိုးဖို့နဲ့လူ့နှောင်ကြိုးခိုင်ခံ့စေဖို့အကောင်းတစ်ဦးအချိန်ပါပဲ။
အဆိုပါ PR စနစ်ပုဂ္ဂိုလ် / Publicist
တချို့က publicists ရုံ ... ကုမ္ပဏီရဖို့ပြပွဲများအတွက်လွှမ်းခြုံငှားရမ်းထားကြသည်!
တချို့ကသူတို့ရဲ့ Facebook က, Snapchat, Weibo, Instagram ကို, Twitter ကိုနောက်လိုက်အလုပ်လုပ်ယခုနှစ်ဖြုန်း; wire ကိုဝန်ဆောင်မှုကျော်အမှုအရာများပေးပို့ခြင်းနှင့်အစည်းအဝေးတွေ, ပစ္စည်းပစ္စယပို့စ်တင်။
တချို့ကသတင်းအချက်အလက်များကိုပုံမှန်အယ်ဒီတာများ, စာရေးဆရာများ, သုံးသပ်ရေး, ဘလော့ဂါများနှင့်အခြားသူများနှင့်အတူပုံမှန်အဆက်အသွယ်ထား; သူတို့ကိုထုတ်ကုန် / သတင်းအချက်အလက်လာပြီ; သူတို့ကိုကူညီ။
ဒါပေမယ့် ... ဒီကြီးမားတဲ့ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကမည်သူမဆိုစိတ်ပျက်ချင်ကြပါဘူး!
လက်၌မှတ်ပုံတင်ထားသောမီဒီယာစာရင်းနှင့်အတူ (အမှန်တကယ်၎င်းတို့၏စနစ်များအပေါ်), ဖိအားကစတင်ခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွေဂိုးသွင်းနှင့်ပြက္ခဒိန်ဖြည့်ဖို့အလုပ်ကော်ဇောဗုံးကြဲနဲ့တူ '' sorta ... စတင်ခဲ့သည်။
(ပြီးခဲ့သည့်နှစ် IBC မှမီဒီယာအဆွေခင်ပွန်းရယူထားတာ) ကိုအီးမေးလ်များ၏ဘာသာရပ်လိုင်းများသင်သည်စိတ်လှုပ်ရှားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (အမည်များဖျက်ပစ်) 1 hustling: ကျနော်တို့ကိုမှန်ကန် 1 ခေါ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး:
ပြန်လည်: ရပ်တည်ချက် (နံပါတ်) မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး
IBC @ ကို 'Credit: ABC' 'ကိုစမ်းသပ်သင်၏ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းဘွတ်ကင်လုပ်ရန်!
IBC မှာတစ်ခုခုစတင်ရန်မှမီဒီယာအချက်ပေး // နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်
မီဒီယာအချက်ပေး: (ကုမ္ပဏီအမည်) IBC မှာ
(ကုမ္ပဏီအမည်) IBC မှာ
IBC မှာ (ကုမ္ပဏီအမည်) စာနယ်ဇင်း Briefing များအတွက်မှတ်ပုံတင်မည်
IBC မှာကြှနျုပျတို့ကို Inc ကိုအတူတွေ့ဆုံ
အင်တာဗျူးအဘို့အရှိနိုင် Delivery ကျွမ်းကျင်သူမှတဆင့်ချောမွေ့စွာကိုဖမ်းယူ
ဖိတ်ကြားလွှာ: ကျွန်ုပ်တို့၏ IBC အချိုရည် Reception @ ဟိုတယ်
IBC မှာ streaming အကြောင်းအရာတစ်ဦးကခေတ်္ဘပိင်ရှာဖွေတွေ့ရှိ
IBC မှာအင်တာဗျူးများအတွက်ရရှိနိုင် (ကုမ္ပဏီအမည်)
တဦးတည်းကိုအီးမေးလ်နှင့်အတူ IBC မှာစာနယ်ဇင်းအစည်းအဝေးများအတွက် Big # အခွင့်အလမ်းများ ...
စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲတွင်ဖိတ်ကြားချက်ကို: မိတ်ဆက်ခြင်း (ကုန်ပစ္စည်းအမည်) - ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး ...
IBC မှာတွေ့မြင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုနည်းပညာကိုထိ & ခံစားရတယ် ...
အသေးစားကနေ IBC ဖိတ်ကြားလွှာ (ကုမ္ပဏီအမည်)
အချိန်စာရင်းပါ: IBC မှာ (ကုမ္ပဏီအမည်) ခုနှစ်တွင်-ပုဂ္ဂိုလ်အင်တာဗျူးနှင့် Demo ဖိတ်ကြားလွှာ
IBC DEMO - နယူး (ကုန်ပစ္စည်းအမည်) အောင်မြင်မှုများ IP ကိုအသုံးပြု
IBC မှာ OTT အကြောင်းသင်၏စေတယ်အပေါငျးတို့သနှောင့်အယှက်နိုငျပုံကိုချစ်စရာ (ကုန်ပစ္စည်းအမည်) ရှာဖွေတွေ့ရှိ!
အသကျရှငျဖြစ်ကြောင်းဟုတ်ပါတယ်, စစ်မှန်တဲ့နွေး, ကိုယ်ပိုင်မက်ဆေ့ခ်ျများ, စိတ်ဝင်စားဖွယ်။
ထိုအခါထိုပြည်၌သင်တို့သည် excite မပြုစေခြင်းငှါအကြောင်းအရာလိုင်းများဖြစ်ကြပေမယ့်ဖွင့်လှစ်ဆွေးနွေးမှုသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံရဲ့အစွန်းပေါ်တွင်သင်တင်ထားတော်မူမည်:
ငါသည်သင်တို့ကို IBC အစည်းအဝေးများများအတွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေအများကြီးရတဲ့နေသေချာပါတယ်
ငါသည်သင်တို့ကို IBC မှာမြင်ချင်လိမ့်မယ်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ခုခုရှိ
ငါသည်သင်တို့ကို IBC မှာဖြစ်လိမ့်မည်ကိုငါသိမြင်၏နဲ့ကျွန်မ (ကုမ္ပဏီအမည်) ၏ကိုယ်စားအထဲကရောက်ရှိရန်လိုချင်
ငါသည်သင်တို့ကို IBC ချိန်းတောင်းမရေမတွက်နိုင်သောအီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိပါတယ်သေချာပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါသည်သင်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ခဲ့သည်
မင်းနေကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦး IBC အစည်းအဝေးအချိန်ဇယားဆွဲခြင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်စေခြင်းငှါရှိမရှိအံ့သြခဲ့ပါတယ်
သင် (ကုမ္ပဏီအမည်) နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုထွက်ကိုနားထောငျ
ဟယ်လို! သငျသညျဖြစ်ကောင်း IBC-related စာတိုပေးပို့ရေးအတွက်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံနေနဲ့ကျွန်မသင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အရာကိုမှတဆင့်ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါဘယ်လောက်ခက်ခဲကိုသိရ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယ်ဒီတာ့အာဘော်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ DIY အစည်းအဝေးများ၏မိတ္တူကိုစလှေတျ:
ပဲမှာကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာအကြောင်းပြောပြနေတဲ့ PR စနစ်ကုမ္ပဏီတခုထံမှအီးမေးလ်တယ် IBC ။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကြည့်ရှု, ဒါကြောင့်ငါတပြင်လုံးကိုအီးမေးလ်က (ငါအဘို့အကျော်ကြားဘူးတစ်ခုခု) ကိုဖတ်ပါ။ အောက်ခြေတွင်ကပိတ်ထား (ငါ့ကိုကြောင်း rephrase ပါစေ - ကအနီးကပ်သွား) - ရက်ချိန်းပေးဖို့ url ကို click - မပါတဲအရေအတွက်မျှမလူတစ်ဦး။
စိတ်ဝင်စားအဆက်အသွယ်ကုမ္ပဏီရဲ့စာရင်းဖြစ်ကောင်းသင်သိ (လူမျိုး, ဆိုင်များတွင် / အယ်ဒီတာများသည်သင်၏ထုတ်ကုန် / ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည့်မှတ်ပုံတင်ထားသောမီဒီယာစာရင်းတစ်ခုသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအစုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို မှလွဲ. အဘယ်အရပ်သည်သင်၏ထုတ်ကုန် / ဘာသာရပ်များအမျိုးအစားကိုလိုက်နာသူကိုရှေးရှေးစိတ်ဝင်စားနေကြသည် သူတို့ရဲ့ပရိသတ်ကို) လူတိုင်း အတူတူပွင့်လင်းဖိတ်ကြားချက်ကိုရရှိသွားတဲ့။
ဒါဟာသင်မီဒီယာလူတစ်ဦးနှင့်သူ / သူမ၏ပရိသတ်အတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အစည်းအဝေးများနှင့်အတူအချိန်ဇယားဖြည့်ဖို့များသောအားဖြင့်ပိုကောင်းပါတယ်။
စာလက်ခံသူက Yes / No ကိုတုံ့ပြန်နှင့်သူ့ / သူမ၏များအတွက်အဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းကြိမ်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်အီးမေးလ်အဆက်အသွယ်နှစ်ဖက်စလုံးများအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
အပြုံး / ဆဲဘဝပုံစံ Dial
အနည်းငယ်ထက်ပိုပြီးသေးအိုး (လွင်ပြင်ဟောင်းတယ်လီဖုန်း) သုံးစွဲဖို့ရုံးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဆိ assign ။
တစ်ခုကလေ့လာဆန်းစစ်သူမိတျဆှေသူရရှိခဲ့တဲ့ publicist ၏ခေါ်ဆိုမှုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်:
ပုံမှန်အားဖြင့်ငါခေါ်ဆိုခ, (တစ်ဦးချင်းစီအမည်များ) များသောအားဖြင့်ဖုန်းဖြေဆိုမရကြဘူး။ အချို့လာမည့်ရှိုးမှာရက်ချိန်းတောင်းရန်တောင်းဆိုတဲ့ PR စနစ်လူတစ်ဦးရဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေးရှေးယဉ်ကျေးများမှာနှင့်မျှမတို့, ငါတို့သည် (နည်းပညာအမည်) ကျပ်တည်းစွာလိုက်, flatostrates နှင့် phren modulator တွေကိုအကြောင်းကိုရေးဖို့ကိုမရှင်းပြပါ။
တစ်ဦးတည်းကိုယနေ့ငါဖုန်းပြန်လျှောက်ခြင်းနှင့် Tiffney ငါသည်သင်တို့ကို CES များအတွက်မှတ်ပုံတင်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင် "ဟုပြောသည်။ နေဆဲသွားမည်နည်း "လူအပေါင်းတို့သည် PR စနစ်မိန်းကလေးငယ်များ Tiffney သို့မဟုတ် Jenifer အမည်ရှိကြပြီးကတည်းကကိုယ့် (နိုင်ငံ) ကနေလေယာဉ်ကိုချွတ်ခဲ့ရပြီငါ့ဆိရဲ့အမည်များကိုမအောက်မေ့နိုင်ပါတယ်ကတည်းကငါကငါတခါတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးဦးဖြစ်စေခြင်းငှါ, စဉ်းစားသူမ၏ဖြေကြားကတည်းက ကျက, "ဟုတ်ကဲ့, အဘယ်ကြောင့်?"
သူမသည် "ကျနော်တို့ကသငျသညျ Gazilfraze နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်" ဟုပြောသည်
"Gazelfraze အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း?" ကျနော်မေးနာရီကြည့်။
"B2B စျေးကွက် zingbats နှင့် dildos ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ရန်အဘို့အသူတို့ဟာလူမှုရေးကဗီဒီယိုကွန်ရက်ဆော့ဖျဝဲပါစေ။ "
"တဖန်သင်တို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖြစ်စဉ်းစားထားလား" ကျွန်မမေးသော် - ငါ3မိနစ်အဘို့ဤမိန်းကလေးနှင့်အတူဖုန်းပေါ်မှာဖူးချင်ပါတယ်နှင့်ကြီးထွားလာသည်ငါ့လက်သည်းခံစားရနိုင်ပါတယ်။
"ဟုတ်ကဲ့" ဟုသူမကသူမ၏သကြားချိုမြိန်, PR လေ့ကျင့်သင်ကြားအသံပြန်ဖြေတယ်။
"လုံးဝ" ဟုသူမကလေးမိနစ်အကြာခဲ့သည့်ကျနော်တို့စတင်ခဲ့သည့်အခါသကဲ့သို့ perky ကလညျး, ငါအဖြစ်မကြာမီငါဖုန်းကိုဆွဲထားနိုင်အဖြစ်လုပ်မယ့်ခဲ့သည်ကော်ဖီစဉ်းစားငါ့အ ADD ၏တိုက်ခိုက်နေခဲ့သည်။
"အင်း" ပြီးတော့ "သင်အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးပြုပါ ... " သူမ၏ချိုသော 20s တစ်ခုခုအသံဖြင့်ကျဆင်း, သူ mumbled
"အဘယ်သူမျှမပေးပါဘူး" ငါသည်ကျနော်တို့ (နည်းပညာအမည်) ကိုလိုက်နာ, ကြှနျုပျတို့လူမှုရေးကဗီဒီယိုဆော့ဖ်ဝဲမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမစိတ်ဝင်စားမှုရှိချင်ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့လိုထင်ခဲ့တာလဲ "
"အိုကေဒါဆို" ဟုသူမက "ကျွန်မကျနော်တို့ထို့နောက်မထိုက်မတန်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးခန့်မှန်း။ " သူမ၏စူပါစွဲချက်တင်, Over-ဓါတ်ကိုပြန်လည်မိမိကိုယ်ကိုအထိပြန် လာ.
"မဟုတ်ပါ" ငါ "ကျနော်တို့ကိုမကျင့်မှန်းဆ" ဟုပြောသည်။
"ကောင်းပြီ" လို့သူက snarkyness သူမ၏အသံသည်သို့တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးနှင့်အတူ "သင်ရုံကြီးစွာသောနေ့၌ရှိသည်။ " ကိုနှိပ်ပါကပြောသည်။
ကျွန်မသူမပြောချင်ခဲ့တယ်သေချာပါတယ်, ငရဲသို့သွားရ, သင် AHole ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မတိုဘာ crappy ဂျက်-ကြံ့မှတ်ဉာဏ်မသိခဲ့ပါ။ သူမကုမ္ပဏီရဲ့နှင့်သူမ၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖော်ထုတ်ခဲ့သိတယ်။ (ငါ, ငါ cc'ed ကြလိမ့်မယ်ကကိုအောကျမေ့ခဲ့ယခုဆန္ဒရှိ) ။
ကျနော်တို့ကဒါဇင်ငါတို့သို့မဟုတျကြှနျုပျတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသောသူမရှိသဲလွန်စရှိသည်သောသူ PR စနစ်မိန်းကလေးငယ်ထံမှတစ်ရက်ခေါ်ဆိုရ။ သူတို့ဟာဝဘ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ဖို့ဘုံသဘောမျိုးရှိသည်နှင့်မယ့်သူတို့ရဲ့ client ကိုရဲ့တဲမှ traffic ကိုရောက်စေဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့ရေမှုန်ရေမွှားများနှင့်ဆုတောင်း mode မှာဒေါ်လာခေါ်ဆိုမသွားကြပါဘူး။ ဒီ client ကိုကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးဆောင်နေကြသည်ကဘာလဲ? Air ကိုခေါင်းနှစ်လုံးမိန်းကလေးတွေ - မပါကိုယ့်တစ်ဦးအချက်ကိုဖျော, ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမဟုတ်ပါဘူး - တယ်လီဖုန်းရှေ့ရပျဖွစျသလော သို့မဟုတ်ငါမှေးယူသင့်ပါတယ်သူကိုဖွင့်မယ့် Grumpy ဟောင်း fart ဖြစ်ကြောင်းကို?
ကျွန်ုပ်တို့၏တာရှည်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ထောက်. , ငါတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တုံ့ပြန်နှောင့်အယှက်မပြုခဲ့ ...
ဤသည်က M & E ကိုလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအသှငျအပွငျသို့တွားတတ်သောအဖြစ်အတိမ်အနက်နှင့်အနံအတွင်းရှိကြီးထွားဖို့ဆက်လက်သော IBC မှအထူးသဖြင့်မှန်သည်။
ယင်းနည်းပညာများပိုမိုကျယ်ပြန်နှင့်ပိုပြီးခေတ်မီဆန်းပြားဖြစ်လာအဖြစ်, မီဒီယာလူများ, စျေးကွက် segments များအာရုံစိုက်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သူတို့ကိုနားလည်နှင့်ခြုံငုံကဗီဒီယို / အသံဇာတ်လမ်းပြောပြစက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်းအဖြစ်ဈေးထဲမှာကုမ္ပဏီများအနက်ကိုဘော်ပြရကြမည်။
အကြီးတန်းအမှုဆောင်လုံးဝဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်အာရုံကိုတွေ့ဆုံကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့လူကို (သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦး), အရည်အသွေး, မဟုတ်အရေအတွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရပါမည်။
သမ္မာတရားကိုစီမံခန့်ခွဲမှု / အဓိပ္ပါယ်ရှိသော, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောအစည်းအဝေးများလိုအပ်ပါတယ်လိုလားသည်။
အကောင်းဆုံးအစည်းအဝေးများစီမံခန့်ခွဲမှုထုတ်ကုန် / နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်းသို့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရရှိသွားတဲ့နှင့်အလားတူထုတ်ကုန်, ပြန်နည်းပညာသတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးဘယ်မှာရှိသူများဖြစ်ကြသည်။
သူ / သူမကံကောင်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သူတို့တစ်တွေထုတ်ကုန်အသစ် / ဝန်ဆောင်မှု / နည်းပညာစိတ်ကူးနှင့်အတူထွက်သွားလမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ကောင်းသောအလားအလာစေပါတယ်။
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်လိုလားတဲ့သူတိုင်းသုံးသပ်သူ / မီဒီယာလူတစ်ဦးကအရေးကြီးတယ်။ သူတို့ကပြပွဲအချိန်ကယခုနှစ်-မဟုတ်ရုံတစ်လျှောက်လုံးအရှိဆုံးအကူအညီဖြစ်နိုင် prompt ကိုနောက်ဆက်တွဲနှင့်အဆက်အသွယ် / ထောက်ခံမှုပေးထားသောရပါမည်။
ဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားဖို့မနက်ဖြန် - နှင့်အသုံးပြုခြင်း - သူတို့လုပ်ဖို့လိုအပ်သောအရာကိုပထမဦးဆုံးလက်ကြည့်ရှုရန်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မှအကြီးတန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိကိုဆွဲဆောင်နေသောကြောင့် IBC တူသောဗိုလ်မှူးရှိုးကုမ္ပဏီများဖို့အရေးကြီးလှသည်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန် / န်ဆောင်မှုသူတို့အားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မည့် M & E အမှုဆောင်အရာရှိကိုပြသနေတဲ့နို့ဆီအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
သို့မဟုတျ, Si Robertson ကမိမိအမူထူးခြားတဲ့အခွက်ကရှင်းပြသည်အဖြစ်, "ငါသည်ချက်ပြုတ်၏ MacGyver ဖြစ်၏။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုမုန့်, ဂေါ်ဖီထုပ်, အုန်းသီး, မုန်ညင်းအစိမ်းရောင်, ဝက်ပေ pinecones နှင့် woodpecker တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဆောင်ကြဉ်းခဲ့လျှင်, သင်တို့ကိုငါအကောင်းတစ်ဦးကြက်သားအိုးပိုင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ "
OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် 2018-06-29
ယခင်: Ooyala ထပ်ပြောသည် VR360, HEVC လွှနှင့်၎င်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုပလေးအောက် Solutions ရန်အပ်ဒိတ်များနှင့်အတူ Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းရန်ပို
နောက်တစ်ခု: အသံအင်ဂျင်နီယာ / Technician အ, ဝိဇ္ဇာရေးစင်တာ